आरामदायक सोफा ओछ्यान, मोडेल र विचारहरू जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न | सजाउनुहोस्
आजको सोफा बेडहरू, आरामदायक र सुन्दर
सुसाना Godoy | | सजावट, डिजाइन, फर्नीचर
के तपाई खोज्दै हुनुहुन्छ? आरामदायक सोफा ओछ्यान? सोफा ओछ्यानमा सँधै अप्ठ्यारो फर्नीचर सुत्नको लागि र हाम्रो बस्ने भोजमा कोठामा बस्नको लागि अप्राकृतिक लागि प्रख्यात रहेको छ। आज तपाईं बजारमा उत्कृष्ट मोडेलहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन सजिलै हेरफेर गरिन्छ र ती सबै सजावटहरूमा फिट हुन्छ। त्यसकारण तिनीहरू ठाउँको समस्या भएका घरहरूको लागि एक उत्तम विकल्प हो।
जब तपाईको आदर्श सोफा-ओछ्यान छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईंले यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि यो तपाईं कहाँ अवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ (सजावट कोठा वा माध्यमिक कोठा) र यसको उद्घाटन प्रणालीको सजावटसँग मिल्छ, किनकि स्पष्ट रूपमा तिनीहरू उस्तै ओगट्ने छैनन् जब तिनीहरू हुन्छन्। खुला भन्दा बन्द छ। तसर्थ, हामी के हेर्न जाँदैछ आरामदायक सोफा बेडहरू के हुन् जुन तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ बिभिन्न मोडलहरू र प्रकारहरू जुन आज अवस्थित छन्।
होगर २ 24 - सोफा बेड क्लिक गर्नुहोस् ...
MUEBLIX.COM | सोफा बेड ...
1 आरामदायक सोफा ओछ्यानहरू
2 ठुलो र आरामदायक सोफाहरू
2.1 डबल सोफा ओछ्यान
2.2 एक व्यक्तिको लागि सोफा ओछ्यान
2.3 लामो शैली शैली सोफा ओछ्यानमा उठ्नुहोस्
2.4 दुई ओछ्यानको साथ सोफास
3 सोफाका प्रकारहरू
आरामदायक सोफा ओछ्यानहरू
वर्षौं अघि हामीले यो धारणा राख्यौं आरामदायक सोफा ओछ्यान तिनीहरू अवस्थित थिएनन्। यो पहिलो पटक होइन कि हामी आफन्तको घरमा गएका थियौं र हामीले यसै ठाउँमा सुत्नुपर्‍यो। निस्सन्देह, रात त्यति सहज थिएन। तर आज तिनीहरू धेरै विकसित भएका छन्। यो सत्य हो कि गद्देहरू सरल हुन जान्छ र त्यसैले अलि सेतो हुन्छ। यद्यपि हामीसँग भएका सबै विकल्पहरूमा, हामी सोच्दछौं भन्दा बढी सान्त्वना हुनेछ।
तपाईं यो प्रयोग गर्न के जाँदै हुनुहुन्छ?: सबै भन्दा पहिले, तपाईले यो दिन लाग्नु भएको प्रयोगको बारेमा सोच्नु पर्छ। यदि तपाईं सोच्छौं कि तपाईं यसलाई ओछ्यान भन्दा सोफाको रूपमा अधिक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तब साधारण र सस्तोले तपाईंको लागि उत्तम काम गर्नेछ। तर यदि तपाईं नियमित रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नको लागि यस प्रकारको मोडेल रोज्नुहुन्छ भने, अलि बढी लगानी गर्न उत्तम हुन्छ। सामग्री, साथै गद्दा आफैंमा, यसले फरक पार्छ जब यो झूटमा आउँछ।
प्रणाली खोल्दै र बन्द गर्दै: थप रूपमा, आरामदायक सोफा बेडहरूमा पनि एक साधारण खोल्ने र बन्द प्रणाली हुनु आवश्यक छ। कुनै पनि भन्दा बढी किनकि हामी यसलाई खोल्नको लागि धेरै समय खर्च गर्न चाहँदैनौं। यदि हामीलाई बारम्बार चाहिन्छ भने हामी यसको कदर गर्नेछौं। त्यसोभए, यसलाई खरीद गर्दा निश्चित गर्नुहोस् कि यो रूपान्तरण गर्न केहि सजिलो छ।
ठाउँ: जब हामीसँग कम ठाउँ छ, तब हामीaलाई छनौट गर्न सक्छौं क्लिक-क्लक शैली सोफा जुन हामीले पनि छलफल गर्यौं। यो भन्नु पर्दछ कि तिनीहरू आरामदायी छन्, धेरै मोटा गद्दा नभए पनि यसले विकृति ल्याउँदैन र तपाईको शरीरलाई राम्रोसँग अनुकूल गर्दछ।
गद्दा आकार: सोफाको ठूलो शक्ति हुन सान्त्वनाका लागि, हामीले गद्दाको चौडाई हेर्नु पर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यो प्रशस्त छ किनकि यसले हाम्रो लागि अतिथिहरू गर्ने बेला चीजहरू सजिलो बनाउँदछ। थप रूपमा, हामी पानाहरू राख्न सक्छौं जुन हामी घरको अन्य खाटहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्दछौं र सोफा ओछ्यानका लागि विशेष उपायहरू किन्नु पर्दैन।
यदि यो आरामको बारेमा कुरा गर्न को लागी, सबै कुरा गणना। यो आराम गर्न ढल्कँदा मात्र होइन, तर यसमा बस्दा पनि हो। आरामदायी सोफा बेडहरूमा उपरोक्त विकल्पहरू छन् तिनीहरू साँच्चिकै कामकाज हुनेछन् भन्नका लागि।
ठुलो र आरामदायक सोफाहरू
डबल सोफा ओछ्यान
जब हामी कुरा गर्छौं ठूलो आरामदायक सोफेहरू, हामीले ती सबैको थोरै फराकिलो संस्करणको बारेमा सोच्नु पर्छ। त्यसैले किन सोफाहरूसँग ए डबल ओछ्यान तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू मध्ये एक हुनेछन्। गद्दा को आयाम को लागी सोफा लाग्दैन, सोफा आफै नै धेरै ठूलो हुनु पर्छ। तपाईं तिनीहरूलाई बिभिन्न तरिकाहरूमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ, तर तिनीहरू मध्ये धेरै जसमा दुई वा तीन-सिटर आर्म चेयर फिनिश हुन्छ जुन हामी सबैलाई थाहा छ। ओछ्यानमा सामान्यतया पहिले नै बनेको भण्डार गरिएको हुन्छ, जसले हाम्रो कार्यको पनि सुविधा पुर्‍याउँछ।
एक व्यक्तिको लागि सोफा ओछ्यान
यदि तपाईं स्पष्ट हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई आवश्यक छ आरामदायक र फराकिलो सोफा बेडहरू छन् तर एकल व्यक्तिको लागि भने, तपाईं ती पालना गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै श doubt्का बिना, Ikea मा तपाइँ अद्वितीय मोडेलहरू फेला पार्नुहुनेछ। एक प्राथमिक यो केहि सानो देखिन्छ, तर जब यो आउँछ यसलाई गद्दामा बदल्नुहोस् यो तपाइँको आरामको लागि उपयुक्त हुनेछ। यस तरिकाले, पाहुना जहिले पनि स्वागत गरिन्छ र जब सम्म उहाँ चाहानुहुन्छ।
लामो शैली शैली सोफा ओछ्यानमा उठ्नुहोस्
हामीलाई चौडाइ प्रदान गर्नेहरु मध्ये एक हो लामो शैली सोफेहरू chaise। तिनीहरू बन्द हुँदा, तिनीहरू दुबै बैठक कोठा र साना कोठाहरूमा फिट हुन उत्तम छन् भन्ने तथ्य बाहेक। तपाईं तिनीहरूलाई निश्चित कुनामा राख्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं स्थानको फाइदा लिनुहुन्छ र तपाईंको सजावटलाई नयाँ रूप दिनुहुन्छ। अझै पनी घरमा छैन?
दुई ओछ्यानको साथ सोफास
विशालको रूपमा एकै समयमा, तिनीहरूले हामीलाई अधिक ठाउँ पनि प्रदान गर्छन्। को दुई ओछ्यान भएको सोफा तिनीहरू उत्तम छन् किनकि, प्राय जसो केसहरूमा हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा विस्तार गर्नुपर्दैन। हामीलाई चाहिने कुरामा निर्भर गर्दै यसको स्वतन्त्र अंशहरू छन्। यस प्रकारको सोफाको स्वतन्त्रता ध्यानमा लिनको लागि केहि हो। तिम्रो के हुन्छ
त्यहाँ धेरै प्रकारहरू छन्:
परम्परागत ड्रपडाउन, जसमा फोम, लेटेक्स वा वसन्त गद्दा हुन सक्छ र तपाईंले स्टोरमा सोध्नु पर्छ कि यो ओछ्यानमा पल्टिन सकिन्छ वा खोल्दा यसको कुशन छ भने।
Futon प्रकार, सस्तो, आधुनिक र कुनै पनि हालको सजावटको लागि उपयुक्त। जब तपाईं यसलाई किन्नुहुन्छ, यो पक्का गर्नुहोस् कि यो बसिरहेको बेला चिप्लन छैन, यसको कभर छ र यसको डिभिजनले तपाईंलाई आरामसँग सुत्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं उत्तम खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई बीच संरचनाको साथ छनौट गर्नुहोस्।
क्लिक-क्लक सोफा: सरल र सस्तो। युवा सजावट र छिटपुट प्रयोगको लागि आदर्श, ती ठूला हुन्छन् र फोल्डिंग ब्याकरेस्टसँग जुन यो सजिलै ओछ्यानमा परिणत हुन्छ।
लुकेका ड्रअरको साथ सोफा-ओछ्यान। अघिल्लोको जस्तै फोल्डिंग ब्याकरेस्टको साथ, तर सानो र बढी आरामदायक किनभने तिनीहरूसँग तल हटाउन योग्य ड्ररर छ जसले ओछ्यानलाई बेड बनाउन विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू माध्यमिक कोठाको लागि राम्रो विकल्प हो।
También existen अन्य कम सामान्य तर धेरै चाखलाग्दो सोफा बेड मोडलहरू यसको अवधारणा मा, जस्तै दुई एकल बेड, एक चारपाई ओछ्यानमा रूपान्तरण र सोफा- trundle।
के तपाईंले भर्खर आरामदायी सोफा बेड किन्नुभयो? हामीलाई भन्नुहोस् कुन मोडेल र तपाईंलाई यसको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » आजको सोफा बेडहरू, आरामदायक र सुन्दर
मारिया एलेना सेर्ना भन्यो
मलाई थाहा छ मँ कहाँ जान्छु सोफा ओछ्यानमा जुन तिनीहरूले सुन्तला रंगमा अन्तमा प्रकाशित गर्छन् मलाई आग्रह गर्नुहोस्, धेरै धेरै धन्यवाद
मारिया एलेना सेरानालाई जवाफ दिनुहोस्
कृपया मलाई केबिन सोफा प्राप्त गर्न मूल्य र सम्पर्कको स्थान चाहिन्छ, पहिलो छविमा। म धेरै इच्छुक छु। धन्यबाद।
Nidia लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई थाहा छैन तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ तर म सुझाव दिन्छु कि तपाईं आफ्नो शहरमा डिजाइनर फर्निचर स्टोरहरूमा जान कोशिस गर्नुहोस्। यदि तिनीहरूसँग छैन भने तिनीहरू निकटतम भण्डारहरूको बारेमा मार्गदर्शन गर्न सक्नेछन् जहाँ तिनीहरूले पत्ता लगाउँदछन्।
Marilo लाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ दिउँसो, तपाई कहाँ जानुहुन्छ भनेर जान्न चाहान्छु, म सोफा बेडका धेरै मोडेलहरूमा चासो राख्छु, विशेष गरी पहिलो र अन्तिम, म शहरको बीचमा अवस्थित छु (सान्ता रोजालिया)। कृपया सकेसम्म चाँडो निर्देशांकहरू पठाउनुहोस् र उनीहरूको लागतहरू।
नमस्ते ... मँ कहाँ १ र marked चिह्न लगाइएको सोफा ओछ्यानहरू पाउन सक्छु, एउटा सुन्तला र अर्को सेतो हो।
गिगीलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई थाहा छ कि तपाइँका डिजाइनहरू क्विटोको सालोन डेल म्यूबल प्रीमियर २०१२ मा हुनेछन्
हामी मध्ये धेरै जसलाई देखाइएको अन्तिम सोफा प्राप्त गर्न चाहान्छौं, त्यसैले म स्टोरको ठेगाना सुझाव गर्दछु कि यो बेच्छ वा यसलाई वेबमा कसरी खोज्ने।
जियोभानालाई जवाफ दिनुहोस्
गुइलर्मिन लारा भन्यो
म तपाईको फोन नम्बर मलाई सम्पर्क गर्न को लागी सक्षम हुन चाहान्छु। म सोफा ओछ्यानमा इच्छुक छु, धन्यवाद
GUILLERMINA LARA लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले सोफा ओछ्यान किन्नु पर्छ, के तपाई मलाई ठेगाना पठाउन सक्नुहुन्छ जहाँ यी डिजाइनहरू फेला पर्‍दछन्? धन्यबाद
मलाई सम्पर्कको साथ मद्दत गर्नुहोस् मलाई सोफा बेडमा रूचि छ, कृपया मूल्यहरू जान्नको लागि
सालोमलाई जवाफ दिनुहोस्
hortencia flores Garcia भन्यो
नमस्ते, म सोफा ओछ्यानमा # interested मा रूचि राख्छु। म यो कसरी समावेश हुन्छ भनेर हेर्न चाहान्छु। जान्नुहोस् कि उनीहरूले मलाई पोजा रिका भेराक्रुजमा कसरी पठाउन सक्दछन्। म तपाईको जवाफलाई पर्खिरहेको छु, धेरै धेरै धन्यवाद
Hortencia flores Garcia लाई जवाफ दिनुहोस्
जैमे ए _ बारगल्ली आर। भन्यो
नमस्ते, म जान्न चाहन्छु कि तपाईं सुन्तला रंगको कुर्सी बेच्नुहुन्छ भने, म मेक्सिकोको DF (मेक्सिको सिटी) मा बस्छु
यदि हो भने, के तपाई मलाई भन् सक्नुहुनेछ कि म कुन स्टोरमा यो किन्न सक्छु?
जैम ए लाई जवाफ पठाउनुहोस्।
मारिया vazquez भन्यो
सुन्तला रंगको कुर्सी फर्मबाट हो http://www.bonbon.co.uk/। तिनीहरूको वेबसाइटमा तपाईं अधिक विवरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ 😉
मारिया Vazquez लाई जवाफ दिनुहोस्
ग्वाडालुपे मोरालेस जेपेडा भन्यो
नमस्ते, जैमे ए_बार्गल्लाई जस्तै, म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि यदि कृपया मलाई सुन्तला आर्मचेयर-बन्क बेचिएको छ र कुन प्रतिष्ठानमा म मेक्सिको सिटी, डीएफ, मेक्सिकन गणतन्त्रमा बस्दछु, कृपया मलाई जानकारीको लागि आग्रह गर्नुहोस्, धन्यवाद!
ग्वाडालुपे मोरालेस जेपेडालाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो म लिटेरि सोफामा रूचि राख्छु जहाँ म तपाईंसंग सम्पर्क राख्न सक्छु DF मा।
माउ लाई जवाफ दिनुहोस्
कार्मेन मोन्टेस भन्यो
मेक्सिकोमा यो बंक बेड सोफा छ? म आग्रह गर्छु
कार्मेन मोन्टेसलाई जवाफ दिनुहोस्
जहाँ म बंक सोफा र सेतो ओछ्यानको प्रकार किन्न सक्छु
बीट्राइजलाई जवाफ दिनुहोस्
सुन्तला रंगको कुर्सी फर्मबाट हो http://www.bonbon.co.uk/
मारिया एस्तर Mendívil भन्यो
म रानी वा राजा आकारमा आधुनिक, आरामदायक र सुन्दर सोफा ओछ्यानमा पाउन जरुरी छ। के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि म भर्खरको सुन्तलाको सोफे ओछ्यान किन्न सक्छु? धन्यबाद
मारिया एस्तर Mendívil लाई जवाफ दिनुहोस्
मोन्सेरात मार्टिनेज भन्यो
म ush white white whiteushush ushushushushush the plush।। I'm I'm I'm।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
Monserrat Martinez लाई जवाफ दिनुहोस्
माएली लोजान। भन्यो
म सुन्तला डोफाको लागतमा र शहरको दोस्रो छवि र शिपिंगमा रुचि राख्छु
माएली लोज9 to लाई जवाफ दिनुहोस्
क्रिस्टिना राइक्ल्मे भन्यो
म सोफ कहाँ पाउन सक्छु जुन एक बन्क बन्छ
क्रिस्टिना राइक्ल्मेलाई जवाफ दिनुहोस्
म अन्तिम सोफा ओछ्यानको लागत जान्न चाहन्छु सुन्तलाले मलाई जानकारी दिन सम्भव छैन। Gdl
योलिमा अरियास भन्यो
म यी लुकेका ओछ्यान र सोफा बेडहरूको लागत जान्न इच्छुक छु
योलिमा अरियासलाई जवाफ दिनुहोस्
फोटो फ्रेमको साथ घर सजाउनुहोस्
फर्श र भित्ता र colorको संयोजन गर्नुहोस्